.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Frozen Keyboard Pro for Android
ကျွန်တော်တို့ Android ဖုန်းသုံးတဲ့သူတွေ တော်တော်များများ ဖုန်းထဲမှာ မြန်မာစာတွေ ဖတ်နိုင်ဖို့ Zawgyi-One ဖောင့်
ထည့်ပြီးတော့ မြန်မာစာတွေ ရေးဖို့အတွက်ကျတော့ Frozen Keyboard ကို သုံးကြတာများပါတယ်။ Chatting လုပ်တာ
Message တွေ ပို့တဲ့နေရာမှာဆို စာရိုက်တာ မြန်ဖို့က ကီးဘုတ်နဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် အရင်က ရိုးရိုး
Frozen Keyboard နဲ့ စာရိုက်တာ တစ်ကြောင်းရဖို့ကို အချိန်တွေ အကြာကြီးရေးရတယ်။ Chatting လုပ်တဲ့ အခါမှာဆို
တော်တော်လေးကို အဆင်မပြေဘူး။ Frozen Keyboard Pro လေးကတော့ စာရိုက်ရတာ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။
အရင် ရိုးရိုး Frozen Keyboard ထက် ဒီဇိုင်းပိုလှသလို လက်ကွက်တွေကလည်း စာရေးရတာ အရမ်းကို လွယ်ကူပြီးတော့
မြန်ဆန်စေပါတယ်။ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေလို့..
Download: Frozen Keyboard Pro
[ Crack Version | No Expired ]
Frozen Keyboard Pro Screenshot
Posted by Thurainlin at 07:07